Qilaaf xoogan oo ka dhex taagan Agaasimaha Madaxtooyada iyo kuxigeenkiisa – Hornafrik Media Network
Qilaaf xoogan oo ka dhex taagan Agaasimaha Madaxtooyada iyo kuxigeenkiisa
Agaasimaha Madaxtooyada Abuukar Baalle ayaa la sheegay in uusan jecleysan hab dhaqanka iyo tallaabooyinka uu qaaday Agaasime kuxigeenka C/risaaq Shoole oo ah nin awood badan ku leh Madaxtooyada, isla markaana taageero iyo garab ka heysta saaxibada ugu waa weyn ee Madaxweynaha.
Loolanka labada nin ka dhex taagan ayaa si aad ah looga dareemay gudaha Madaxtooyada, iyadoo gaartay heer dacwad iyo far isku fiiqid, waxaana ay gaartay Madaxweyne Farmaajo oo aan wali xalinteeda fursad u helin.
Labada nin ayaa waxaa la kala saftay labo koox, waxaana kooxda la safan C/risaaq Shoole ay yihiin kuwo ugu culus ee saaxibada Madaxweynaha, sida Fahad Yaasiin, C/shakuur Mire, iyo rag kale mas’uuliyiin ku jiraan, Halka Abuukar Baalle ay la safan yihiin rag kale oo u badan la taliyeyaasha Madaxweynaha iyo nin la dhashay Madaxweynaha oo lagu magacaabo Xasan Farmaajo.
Wararka ku dhow dhow Madaxtooyada ayaa sheegaya in Agaasimaha Madaxtooyada Abuukar Baalle uu mar todobaadkii hore ku hanjabay inuu is casilayo, inta Agaasime kuxigeenkiisa uu tallaab walba uu ka daba qaadayo, hase ahaatee Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu ka diiday oo uu ku xiray in arrinta taagan la xalinayo kaddib shirka London.
Khilaafka Agaasimaha iyo kuxigeenkiisa ayaa waxay saameyn ku yeelatay Dhalinyaradii ololaha Madaxweyne Farmaajo ka qeyb qaadatay oo labada dhinac u kala saftay, waxaana dhexdooda ka dhex bilaabatay is hariifid iyo in sanka loo taago hadba ninkii la arko inuu dhinaca kale la safan yahay.
Arrinta ugu weyn ee sababtay khilaafka labada nin ayaa ah, kaddib markii Agaasime kuxigeenka Madaxtooyada C/risaaq Shoole uu shaqada ka joojiyay Shirkad Saadka siin jirtay Madaxtooyada oo madax ka aheyd haweeney ku heyb ah Xaaska Madaxweynihii hore Xasan Sheekh.
Waxaa la sheegay inuu ku bedelay shirkad kale oo shuraako ay ku wada yihiin rag ay heyb hoose iyo saaxibo yihiin, kana mid ah saaxibada Madaxweynaha, waxaana arrintan ay keentay inuu ka caroodo Agaasimaha Madaxtooyada.
Lama oga sida xaalka noqon doono, waxaana isha lagu hayaa tallaabada uu Madaxweynaha qaadi doono, maadaama aysan sidan ku wada sii shaqeyn karin labada nin, waxaana maalmaha soo socda la kala ogaan doona cida ku harta Madaxtooyada iyo Kooxda guuleysata labada dhinac ee la kala safan Agaasimaha iyo kuxigeenkiisa.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo gaaray caasimadda dalka qadar ee doha
Mid kamida Mas’uuliyiinta Galmudug oo ku Geeriyooday Magaalada Gaalkacyo